Ihe okpu Giro niile nwere MIPS? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Giro agilis mips - viable ngwọta
Giro agilis mips - viable ngwọta
Ihe okpu Giro niile nwere MIPS?
Mipsbu ihe nchedo Brain Protection System (BPS) di ihe kaririGiro ọ bụlanlereanya.
(egwu dị egwu) - Mkparịta ụka na-abụkarị mgbagha nke ụbụrụ ụbụrụ na ọkpụkpụ okpokoro isi. Mana n'ọtụtụ oge ọ naghị agwa gị ebe ị merụrụ ahụ - Ọ bụrụ na ị zụtara ma ọ bụ chee okpu ọhụụ ọhụụ n'ime afọ ole na ole gara aga, ọ ga-abụ na ị gaara ahụ ihe a na-akpọ MIPS. MIMPS, ọ bụrụ na ị maghị, bụ ngwaahịa kụrụ n'ahịa na 2007.
Kemgbe ahụ, e reela ihe karịrị nde ngwaọrụ itoolu ha. Ma gịnị bụ MIPS? Kedu ka esi mepụta ya? Akpọrọ m ebe a, Sweden, iji chọpụta nke ahụ kpọmkwem. (soft electronic music) Dị ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ọtụtụ n'ime anyị enweela ihe ọghọm ma ọ bụ nwee ihe ọghọm n'ọdịnihu, nke ahụ gụnyere m.
Anyị nwere ike ịnweta ihe a na-akpọ mgbagha. A na-ahụ ihe mgbaàmà nke mgbagha. Ma gịnị ka mgbagha pụtara n'ezie? Kedu ihe ọ dị ka na ụbụrụ? Iji chọpụta, anyị gwara Hans okwu.
Neurosurgeon na ngalaba-nchoputa nke MIPS.- Mkparịta ụka, nke bụ okwu n'ozuzu maka ite nke ụbụrụ ụbụrụ na okpokoro isi, Co concussion pụtara ọtụtụ ihe. Mana ọ dị mkpa ka ị mara na ihe dị ka pasent 80 nke mgbagha na-adị nro.
Ọ bụ ezie na pasent 10 agafeghị oke na ndị ọzọ nwere nnukwu mmerụ ahụ. Ndị a niile edemede a gụnyere na Concussion Inweta Azịza site na ndị ọrụ gị, ma ọ bụ ihe ọ bụla, na ị nwere mgbagha, nke ahụ anaghị ekwu nke ahụ. Mkparịta ụka nwere ike ịbụ ihe na-eme ka ụbụrụ ụbụrụ gị na-ama jijiji.
Mana ekwughi ebe ị merụrụ onwe gị n'ọtụtụ ọnọdụ. Ugbu a, ọ bụrụ na ị nwere obere mmerụ ahụ site na mkparịta ụka na ị na-eme nyocha CT ma ọ bụ MRI, ọ ga-abụ na ị gaghị ahụ ihe ọ bụla. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnwee oke mmerụ ahụ, nke bụkwa nkụja, mgbe ahụ ị ga-ahụ ọtụtụ.
Mana imirikiti ọgba aghara bụ n'ihi obere mmerụ isi nke ị na-enweghị ike ịkọwa. Nke ahụ bụ otú m ga-esi hụ ya. (egwu dị egwu) - Peter Halldin esonyela m ugbu a, onye na-akwado MIPS.
Onye m ga-atụ anya ịjụ ụfọdụ ajụjụ siri ike taa, olile anya y. Ma chọta azịza ole na ole m amaghị. So Peter, gwa m okwu banyere mmalite MIPS? Kedu ụbọchị mbụ Kedu ụdị nke ahụ dị? - Ọfọn, ọ malitere mgbe mbụ m zutere Hans Van Holst, onye dọkịta na-awa ụbụrụ, ọ jụrụ m ma m chọrọ ịme PhD, na ejighị m n'aka na m chọrọ, mana agwara m Hans na m mere ' Aga m anwa.
Anyị wee malite ịgụ gbasara mmewere ahụ na isi mmadụ na ụbụrụ. Hans chọrọ ịma banyere ya, ma amaghị m. N'ihi ya, m gwara Hans, 'Yabụ, anyị nwere ike iji sistemụ nche' anyị nwere n'isi anyị n'ụbụrụ. 'Ebee ka ụbụrụ dị? nwere ike ịdaba na okpokoro isi. 'N'ime mmiri ọgwụ'. Ya mere, na Hans kwuru, 'Ọfọn, echere m na nke ahụ bụ nnukwu echiche.' Ya mere, anyị malitere ịrụ ọrụ n'echiche ahụ wee chọpụta ma ọ ga-ekwe omume itinye ya na okpu agha, ma n'oge ahụ anyị amaghị ihe gbasara okpu agha.
Kedu ka esi anwale okpu agha anyị ma ọ bụ otu anyị si ada n'ụgbọala ma ọ bụ ọgba tum tum ay. A na-anwale okpu agha naanị maka ọdịda dị ọcha. Naanị linia osooso.
Anyị ghọtara ozugbo, nke ọma, anyị nwere ihe dị ukwuu banyere echiche a bụ iji belata ikike ntụgharị nke a ga-ebufe n'ụbụrụ gị, ị ga-enweta ntụgharị a mgbe ị dara n'ala n'akụkụ. N'ihi ya, ọ bụ ụzọ e si edokọkọta iberibe ihe. Na ozi a gwara banyere ya.
Site na nke a anyị ghọtara na ọ bụ nnukwu, nnukwu echiche ma anyị nwere ike ịme nnukwu mgbanwe. Ma belata ọnụ ọgụgụ nke mmerụ ahụ. Ikwuru ihe a na-akpọ rotational motion taa.
Anụtụbeghị m okwu ahụ. Kedu ihe bụ mmegharị ntụgharị? Kedu ihe ngwaọrụ dị ka nke ị mepụtara ma mee iji belata mmerụ ọ na-akpata? - Echere m ịghọta ntụgharị nke ị nwere ike iwere onye ọkpọ ahụ dịka ọmụmaatụ. Nwere ike iguzo na-eti onwe gị ụta mgbe ị gbasịrị ụkwụ site na ọkpọ ụkwụ.
Ma na mberede, ha ga-enweta ngwe elu, ha ga-enweta ntụgharị ya. Ha wee kụtuo ha. Yabụ isi mmadụ na ụbụrụ nwere mmetụta nke ukwuu na ntụgharị a karịa usoro usoro nke ala na akuku, okpu agha na-egwu ala n'ime ala, ị ga-enweta ntụgharị a nke okpu agha ahụ.
Ma ebe ọ bụ na ndị agha dị oke elu, okpu agha ahụ na-enyefe ntụgharị a na isi. Ihe anyị na-eme na okpu MIPS bụ na anyị nwere akwa mkpuchi nwere ike ịgafe n'akụkụ niile, 10 ka 15 millimeters. Ya mere, anyị na-e imomi n'ezie na ị na-ada na ice.
Ya mere ọ bụrụ na ị daa na ice isi ga-aga n'ihu na ntụziaka ọ kwesịrị ịga ma na-agbagharị. Anyị nwere nke a na oyi akwa a. Yabụ anyị nwere ọnụọgụ dị oke ala n'etiti esemokwu a na okpu agha.
Ma mgbe ahụ, anyị na-emegharị ume site na ntụgharị gaa ntụgharị. Ya mere, anyị belata mmegharị ntụgharị na isi na ụbụrụ. (mild electron ic music) - Ya mere ogologo oge ka o were iji nweta atụmatụ ị na-eji ugbu a? Are na-emepe emepe mgbe niile maka atụmatụ ọhụụ n'ọdịnihu? Ma ọ bụ nke a bụ imewe ugbu a nke ga-arụ ọrụ ruo mgbe ebighị ebi? - Anyị na-emepe emepe ka sistemụ ọhụrụ.
Anyị ka na-amụ banyere ọnya isi. Dịka ọmụmaatụ, mgbagha bụ mmerụ ahụ bụ naanị aha maka mgbaàmà. N'agbanyeghị nke ahụ, a ka nwere ọtụtụ nyocha a ga-eme iji ghọta kpọmkwem ihe na-emebi ụbụrụ.
Mana naanị otu ihe anyị maara taa bụ mgbagha a na mmerụ ụbụrụ ndị ọzọ dị njo kpatara mgbaghari a nke isi. Na ihe anyị na-eme, naanị ihe anyị ji okpu MIPS na ngwaahịa MIPS dị iche iche eme bụ na anyị na-ebelata ike ntụgharị nke a na-ebufe ya n'ụbụrụ mgbe anyị amaghị kpọmkwem ike m na-akụ gị ga-emerịrị ị ga-enweta mgbagha. Anyị maara na obere mmetụta dị mma maka isi gị na ụbụrụ gị.
Nke ahụ bụ ihe anyị na-eme na MIPS okpu agha (egwu kọmputa) - Amaghị m nke ọma ma m kwesịrị ịkọwa ụlọ a dị ka ụlọ nyocha nyocha, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ime ụlọ arụmọrụ. Maka ilele nke a, ha nwere ihe niile ịchọrọ iji zụọ MIPS. nri ehihie na-agbaji ọzọ.
Enwere oche bench. Have nwere ụdị stepper, igwe akwọ ụgbọ. Ma na e nwere ibu nke itule mbadamba na mgbatị bọọlụ.
Ọtụtụ eriri. Ma nke kachasị nke bụ na igwe kwụ otu ebe bụ, ebe ahụ ha nwere ọnụ ụlọ juputara na igwe kwụ otu ebe, otu wiil na-agba gburugburu, mgbe ị mechara ọzụzụ na MIPS enwere ụlọ dị jụụ, na ị nwere ịga. Enwere naanị otu ebe ị ga-aga.
Nke a bụ ụlọ ịhịa aka. Ọ dị abụọ ruo anọ, ya mere, abịara m ntakịrị n ’ụbịam maka elekere anọ. Mana enweghị m ike ichere ịhịa aka. (soft electronic music) E nwere a zuru ụwa ọnụ MIPS ule center ala n'ebe na m na-aga gbadata na izute isi nke ngwaahịa mmepe, Marcus Seyffarth, ọwa ule protocol, na ọ na-aga na-egosi kpọmkwem otú o si arụ ọrụ, na o doro anya na ọ na-aga na-eji isi nke na-eme anwansi yiri nke m n'ọdịdị na nha. (egwu elektrọn dị nwayọ) Ọ dị mma, a nọ m n'ụlọ nyocha ugbu a.
Ana m esonyekwa na Marcus Onye izizi, Isi nke Ngwa Ngwaahịa. M na-akpọ Marcus, Marcus the First, n'ihi na ọ bụ otu n'ime Marcus ise ebe a na MIPS Test Log na otu ị si enyocha okpu agha. You're ga-egosi anyị ụfọdụ ule, ị bụghị? - Ee / Ee.
Ya mere, anyị nọ n'isi ụlọ ọrụ MIPS na Stockholm. Nke a bụ nnwale nnwale Halldin nke a na-eji anyị oge ọ bụla anyị na-anwale okpu agha maka nrụpụta na nnabata. N'ezie, anyị na-ejikwa ya iji mepụta ngwaahịa ọhụrụ.
abs na mgbatị ahụ
Aga m egosi gị ule ole na ole. Anyị na-anwale ngwa ngwa maka ntụgharị. Anyị na-anwale ọzọ n'akụkụ anvil, akụkụ ogo 45.
Igwe igwe igwe nke anyi ji anwale na ebe ato di iche. Anyị na-anwale ya, ọ bụrụ na aka m bụ anvil, anyị na-anwale ya na ule ule a nke dị n'ihu. Iji hụ na MIPS, nke bụ ihe niile, nwere ike ịkwaga n'akụkụ niile.
Mana anyị na-ahụ na ọ na-agagharị kpamkpam na ntụziaka ahụ site na nnwale a. Anyị na-anwale na ntụziaka a, nke anyị na-akpọ akụkụ. N'ezie, anyị na-anwale na usoro nchedo ụbụrụ MIPS na-aga n'akụkụ ahụ.
N'ikpeazụ, anyị na-anwale ya n'ihe anyị na-akpọ mmetụta ọ bụla m ga-ahụ ya na ndụ n'ezie. Ya mere mmetụta dị n'akụkụ a na okpu agha ahụ. Ebee ka ihe mberede ọgba tum tum na-eme, a ga m asị - Ọ dị mma, enwere m ike iburu isi ule gị? Otu nkeji gara aga ihe a tụrụ ton.
O doro anya na ọ bụ nha, nke ọma, ọ bụ nha, ọ bụ isi 58cm, ọ bụghị ya. Nke a bụ oke nha m. O kwesiri ibu ezigbo Naja.
N’okwu a enweghị m ike ikwenye etu olu m siri sie ike. N'ihi na nke ahụ adịghị mfe, nri? - Nke ahụ bụ 42 n'arọ. - Nri. - Anyị nwere isi nyocha dị iche iche maka okpu agha dị iche iche s anyị nwere oke nha, anyị nwere ogo nwata, bukwara nnukwu ibu.
Ha niile nwere sistemu accelerometer iji chịkọta data ahụ. Ma kwa gyro iji jide n'aka na anyị ga-etinye okpu agha ahụ n'ụzọ ziri ezi tupu ịtọlite ​​ule ọ bụla - Ọ dị mma, ọ dị mma, m ga-enye gị nke ahụ - Ọ dị mma, ịnwere ike itinye ya na okpu agha ahụ. Yabụ mgbe anyị nwalere, anyị na-anwa ime ya n'ụzọ ị ga - ejikarị okpu agha iji kpuchie eriri ya.
You gaghị - enwere m nke m nkasi obi. Know mara, na-agbagharị n'akụkụ ebe ahụ. - Ọnọdụ ya ka imi dị mma na nsọtụ okpu agha ahụ, nkịtị.
Anyị ga-enwe obere ngwa ọrụ a iji hụ na ọ dabara nke ọma dịka nkọwa nke okpu agha ahụ. Okpu agha ọ bụla nwere nkọwa maka ogologo ahụ. Mgbe ịmechara nke a, mee ka sistem ahụ sie ike ma tinye ya n’elu bench.
Ule ule ga-amata site na nyocha m ihe dị elu, olee mmetụta na ihe niile. Ngwaọrụ nwere njikọ ac na ngwa a, nke na-agwa anyị ebe isi dị n'ezie. Ya mere, na mgbe anyị na-anwale, anyị nwere ike ịnwe otu ntọala ahụ mgbe anyị na-anwale okpu agha mbụ na ụdị MIPS nke okpu agha ahụ.
Ozugbo m nwere ọgụgụ, nọmba m chọrọ ịnwe, naanị m na-etinye na lever na-ejide isi na okpu agha ebe n'oge ọdịda tupu ịda ada. Mgbapụta nke tọhapụrụ bụ naanị 50 cm n'elu anvil. Mgbe ahụ ị dị njikere ịga ịpị bọtịnụ iji bulie ya wee dobe ya ọzọ. (egwu egwu dị egwu) - Ọ dị mma, ule ahụ gafere ebe ahụ, nsonaazụ ya dịkwa ebe a, nri? - Eeh.
Yabụ nyocha data niile na-ebugharị site na eriri na kọmputa wee tinye mmemme a. Ihu ọma anyị na-ahụ linear accelerations ebe a. Ma dị ka ị pụrụ ịhụ na isiokwu ahụ, nwayọ nwayọ sitere na mmetụta ahụ.
Ya mere na nke ahụ bụ 1,000 okpokolo agba kwa abụọ na ngwa ngwa ngagharị. Anyị nwere ike ịse ya site na foto ma ọ bụrụ na ịchọrọ nyocha ngwa ngwa. Tụnyere nsụgharị abụọ ahụ n'akụkụ n'akụkụ, ma d niile nke ahụ.- Ọ dị mma.- Na na eserese dị ebe ahụ ị ga-ahụ edo edo-acha akwụkwọ ndụ na ọcha na ahịrị, ndị dị iche iche x, y, z, parameters.
N'etiti usoro ndị ahụ ọ bụ milliseconds ise - ee, na-eche na ntabi anya na-ewe ihe dị ka 100 milliseconds. - Kpọmkwem - Nke ahụ pụtara na nsonaazụ ga-agabiga tupu ị mata na ọ bụ ihe merenụ - Ee, yabụ, ọ bụ oge dị mkpirikpi ka ịnwere ike ịchekwa ndụ gị. Enwere m ike igosi gị ụfọdụ akụkụ ya.
Anyị nwere ike ịhụ ọsọ angular na ọsọ angular. Otu akụrụngwa ị nwere, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọcha na edo edo. Ogologo angular na-adaba na elongation na mgbawa nke ụbụrụ ụbụrụ kachasị.- Ma nke ahụ bụ kpọmkwem usoro MIPS maka irradiating, ọ bụghị ya? - Kpọmkwem.
Ya mere na ọnụ ọgụgụ ahụ ga-abụ isi ihe ma ọ bụ ngwakọta anyị na-ele anya mgbe anyị na-atụgharị MIPS na okpu na-abụghị MIPS. Ma ị nwere ike ịhụ na ị nwere ike nweta akara ala na okpu MIPS - Ọ dị mma, nkeji nkeji gara aga ị kwuru na mgbe ọtụtụ, ọtụtụ ule dị ka nke a, ị chọpụtara na okpu na-abụghị MIPS na-ada dị iche. Ma na ị ga-enwerịrị okpu agha ahụ n'ụzọ dị iche.
Na ọ na-awụ elu elu karịa ikuku. Ọ bụghịzi obere njide n'ihi na ike na-etinye obi ya. Ike ka dị na okpu agha ma ka na-agbapụ ebe ọzọ - ee, kpọm kwem.
Echere m, ebe ọ bụ na anyị na-agbagharị ike, ụgbọ elu amị, MIPS, ị ga - enweta ike, kama ị ga - awụlikwa elu, ị ga - - ee, yabụ na ị gaghị eche na ọ bụ isi ọ bụrụ na ị mee Mberede ahụ ga-ahụrịrị na ị hụrụ na ọ dị obere. Ejiri usoro gị tinye ike gị niile - ee, ọfụma. (egwu elektrọniki dị nro) - I chere na enwere ozi na agụmakwụkwọ zuru oke banyere mmetụta nke mgbagha na ụbụrụ merụrụ site na ịgagharị? - Ihe kachasị mkpa bụ na ndị mmadụ na-eyi okpu agha.
Ya mere, m na-ekwu, nke ahụ bụ ihe kachasị mkpa. Na ị nwere okpu agha mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala naanị ịrụ ọrụ ma ọ bụ obere obere ụzọ.
Anyị nwere ike ịhụ na ọtụtụ ma ọ bụ ọtụtụ ihe ọghọm maka obere mkpirisi a ị na-aga ụlọ ahịa ma zụta ihe ọ bụla. Tinye okpu agha. Ana m eji okpu agha kwa ụbọchị.
Ọ dị ka mgbe ị gbanye belt oche n'ime ụgbọ ala. Ọ bụ maka m ọ na-aga n'ekwughị. Na mba ndị ọzọ na Europe, okpu eji eme ihe abụghị ihe a na-ahụkarị na Sweden.
Mana ọ bụrụ na ị ghọta etu isi na ụbụrụ mmadụ si enwe mmetụta ọsọ ọsọ, yabụ n'ezie na ịchọrọ ị nweta okpu agha na okpu agha nke nwere nchekwa. Taa a nwalere maka ịdị ọcha dị ọcha, ị gaghị ada. Fall daa n'akụkụ.
Ma ọ nwere ike nweta ntụgharị. Anyị makwaara na ụbụrụ na-aka emegharị ahụ anya. Yabụ na enwere olile anya na okpu agha ga-aka mma karịa afọ iri na-abịanụ.
Na olile anya na ọtụtụ okpu agha ga-enwe sistemụ ntụgharị. (Cheeky electronic music) - Mgbe ọ na-ahọrọ ịhọrọ okpu agha maka onwe m, ana m adabere na ihe ole na ole, m na-adabere na Aesthetics nke okpu agha ahụ. Kedu ka ọ dị mgbe m na-eyi ya? Kedu ka odi mfe? Ọ dị fechaa? Ọ nwere ọfụma nke ọma echeghị m ma ọ na - echedo isi m? Maka na m na-echekarị na okpu agha kacha elu ga-eme nke ahụ.
Na echeghị m eche maka mmegharị ntụgharị maka nke abụọ. Ihe m anụtụbeghị ruo taa. Ma na azụ, aghọtara m ugbu a na mgbe anyị nwere otu n'ime ihe ọghọm ndị a, nke ahụ bụ n'ezie ihe na-emebi ụbụrụ anyị. (egwu electronic dị egwu) Igwe mmiri a na-emegharị mmegharị na-aga n'ihu.
E bufere ya ụbụrụ. A na-anwale ọtụtụ okpu agha na nnwale ọdịda dị ka nke a. Ọ bụrụ n’ịleba anya n’ime ala snow, ị ga - ahụ na snow ahụ adabeghị aga.
Ugbu a chee na nke a bụ ụbụrụ gị ma anyị na-anwa iburu ọsọ ọsọ ọsọ. ka anyị na-enweta ya na anyịnya igwe. Mgbe ahụ ị ga-amalite ịhụ mmetụta nke ihe ọghọm ma ọ bụ ihe ọghọm dị otú ahụ.
Ọ bụ ya mere eji mepụta usoro MIPS. Emere ya iji belata mmetụta na igbochi mmerụ ụbụrụ. Ọ bụrụ na ị mụta ihe ọ bụla, nye isiokwu a isi mkpịsị aka taa.
Maka ederede ndị ọzọ pịa ebe a n'okpuru.
MIPS okpu agha ọ bara uru?
MIPS okpu aghanye mgbakwunye nchekwa maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè niile. Ya mere ọ bụrụ na ị dị njikere iji dochie ochie gịokpu agha, mgbakwunye $ 20 ma ọ bụ karịa iji kwalite site na ndị na -MIPSkaMIPS-equipped nlereanya dị mma-kwesịrịọnụahịa ahụ.
Ndi okpu Giro dị mma?
Mkpebi ikpeazu: Na mkpokọta, ndịTụgharịaDebanye aha MIPS bụ otu n'ime azụmahịa kacha mma ị nwere ike ịchọta n'ahịa na 2021 ma ọ bụrụ na ịchọrọ ntụkwasị obi, ntụsara ahụ ma sie ikeokpu aghamaka ịgba ígwè. Enwere ike idozi ya iji dabara isi gị n'ụzọ zuru oke site na Roc Loc Sport System.
Kedu okpu agha nwere MIPS?
Ihe karịrị nde iseokpu aghaNa-egosipụtaMIPSerere teknụzụ ruo na njedebe nke 2017. can nwere ike ịzụta ugbu aMIPS okpu aghasite na ọtụtụ n'ime igwe kwụ otu ebeokpu aghaụdị, gụnyere Bell, Giro, Pụrụ iche, Bontrager, Lazer, MET, Poc, Smith Edịewepu; Ebe ahụdịọ bụghịMIPS okpu aghasite na Kask ma ọ bụ Catlike, dịka ọmụmaatụ.1. 1. 2020.
Giro ọ bụ ndebanye aha MIPS?
Deba aha MIPSOkpu agha |Tụgharịa. Na a mbughari visor na ike-echebe gị site na anyanwụ, 22 vents na-ị jụụ, na kwukwara uru nkeMIPS,Deba aha MIPSokpu agha bụ ezigbo nhọrọ maka njem ọ bụla, oge ọ bụla.
nwere ike ị drinksụ ihe ọ causeụ causeụ na-akpata kansa
Ngwakọta Giro ọ nwere MIPS?
Giro eletrik MIPSAtụmatụ okpu agha
IheNgwadoro MIPSabịa na isii na-ụbọchị na agba,nwereusoro dabara adaba nke na-ejide ngbanwe ya yana gụnyere aMIPSliner n'ime maka nchekwa ọzọ.10 2018.
Kedu ụdị ọdịiche MIPS na-eme?
Ihe niile anyị maara bụMIPSokpu agha nwere akụrụngwa dịkarịa ala 10% ka mma na njikwa ntụgharị ntụgharị karịa ndị na -MIPSeziokwu. Ọ gwụlaMIPSga-ekwu.
WaveCel ka mma karịa MIPS?
Dị ka otu nnyocha na acylọ Ọrụ Nyocha Legacy na Portland, Oregon si kwuo,WaveCeldị irè karịkarịa MIPSna mbenata ma linear mmetụta agha na ezi uche agha na ụbụrụ. Ọ bụ ezie na ọ dị ka nke Koroyd nke Smith ji, okpu igwe nke Koroyd ka na-eji aMIPSoyi akwa.
Ogologo oge ole ka okpu agha Giro na-adịru?
Anyị na-akwado naokpu agha kwesịrịdochie anya 3-5 ọ bụla iji hụ na ị nwere uru nchekwa zuru oke nke otu mmaokpu agha, nakwa dị ka aokpu aghanakacha ọhụrụteknụzụ na nke ahụ na-agbaso ụkpụrụ kachasị dị mkpa ugbu a.
Ndi okpu NFL nwere MIPS?
Echiche dị n'azụMIPSdị mfe: Ihe mkpuchi plastik ahụ na-anọdụ ala n'isi onye ọkpụkpọ n'okpuru padding. Site na ikwe ka isi see n’elu mmiri n’oge mmetụta,MIPSnwere ike iwepu ụfọdụ ike ntụgharị tupu ọ gafee ụbụrụ ya. Ya mere,MIPSnwere ike ọ gaghị abụokpu aghaịzọpụtabọọlụ...
Ndi okpu Giro agilis MIPS okpu maka ịgba n'okporo uzo?
Ezubere okpu okpu nke Giro maka 'ụzọ na ọtụtụ ala' - nke ahụ na-abịa na ịchụ àjà? Enwere m ike ịhụ uru dị na okpu agha dị ka nke a ma ọ bụrụ na ị na-egwu ụzọ ụkwụ ma chọọ ịmara okpu agha gị na-enye mkpuchi ọzọ ma ọ bụrụ na ị daa. Agbanyeghị, enweghi m ike iku ume mgbe m na-agbagharị usoro ahụ.
Gini ka ikwesiri ima banyere agilis MIPS?
Agilis MIPS na-enye ụdị ejiji na arụmọrụ maka ụzọ niile, yana silhouette mara mma, ikuku ikuku, na teknụzụ MIPS. Kechie teepu e ji atụ ihe n’isi, dowe teepu ahụ n’ihu ruo n’azụ.
Kedu Giro kacha mma ma ọ bụ zute Vinci?
Anyị anwalela otu ihe ọkụkụ nke ezigbo okpu agha n'oge na-adịbeghị anya, yana £ 90, Giro Agilis na-atụnyere nke ọma mgbe ọ dabara pound na atụmatụ. Maka £ 10 ọzọ, anyị masịrị Outrider Nchedo Nchekwa, Stu masịrị Met Vinci, yana £ 100. Maka £ 20 ọzọ, Kask Mojito-X nwere ụdị ọrụ ahụ mana enweghị MIPS.